‘विप्लवको जँगली राज चल्दैन ’ मन्त्री बास्कोटा
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति २० असार २०७६, शुक्रबार ०६:१४
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विप्लव समूह आतंकवादी समूह भएको ठोकुवा गर्नुभएको छ । विप्लवका क्रियाकलाव नागरिकमा त्रास र भय फैलाउने र लुटतन्त्र मच्चाउने भएकाले संगठित अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बस्कोटाले भन्नुभयो, ‘कुरा क्रान्तिकारी, परिणाम दक्षिणपन्थीहरुलाई टेवा पुर्याउने हो उहाँहरुको । दक्षिणपन्थीहरुको सेवा गरिरहेको छ विप्लव भन्ने आतंककारी समूहले । यो आतंककारी नै हो । आपराधिक नै हो संगठित रुपमा ।’
सरकारले वार्ताको आह्वान गर्दागर्दै अस्वीकार गरी हिंसा रोजेर विप्लव समूह उपयोगितावादी भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु जम्माजम्मी उपयोगितावादी हो । अराजकतावादी हो । लुटेरा समूह हो । क्रमशः संगठित आतंकवाद हो । सामाजिक फासिवाद पनि हो । त्यो कुनै पनि प्रकारले कुनै दर्शन विचार सिद्धान्तको निकट छैन । चुनाव लड्ने हुती छैन । कुनै कोठामा बसेर फोनमा १२ वटा सिम फेरेर मान्छेलाई दिनहुँ तर्साएर के हुन्छ ? त्यसकारण सरकार तर्सदैँन ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ’वार्तामा नआउने । दाउपेच गर्दे आफूहरुमाथि निगरानी छोड् भनिरहने । आफ्नो धन्दा गरिरहने, हिंसाका लागि वातावरण तयार गरिरहने । धम्काउने, कमिसन माग्ने । ठेक्का पट्टा आदिलाई त्राहीमाम बनाउने । यो जंगली राज त चल्दैन । यो जंगली राजलाई छुट दिन सकिन्न । उहाँहरुले र्निदोष मान्छे र्माया क्रान्तिका लागि हो ?
स्यानेटरी प्याड दिएपछि छात्राहरु नियमित विद्यालय
वडा अध्यक्ष न्यौपानेद्धारा एक महिनाको तलब सहयोग
एमाले निरन्तर भत्किने प्रक्रियामा छः रामकुमारी झाँक्री